Ukudityaniswa kwe-Allegro-Qalisa ukuthengisa kwi-Allegro nge-Propar E-Export!
Kulula ukulawula ivenkile yakho yeAllegro ngePropars!
Qalisa ukuthengisa eAllegro ngePropars, kwaye iimveliso zakho ziya kuthengiswa ePoland!
Ukuthumela ngaphandle kulula kakhulu ngokudityaniswa kwepropro allegro!
Imiyalelo yeAllegro iqokelelwe kwiscreen esinye nayo yonke eminye imiyalelo yakho.
Ungazithengisa iimveliso ozongeza kwiPropars kwi-allegro ngonqakrazo olunye.
Indawo yentengiso esekwe ePoland uAllegro yinkokeli engathandabuzekiyo yentengiso yaseMpuma Yurophu kunye nomdlali omtsha kwimarike yaseYurophu. I-Allegro iye yaba yenye yeemarike ezili-10 eziphezulu ze-intanethi emhlabeni, emva kophuhliso lwayo olukhulu kwixesha lokugqibela.
Inzuzo enkulu ye-Allegro kubathengisi linani labathengisi ababambayo. Nangona inani labasebenzisi abasebenzayo lidlula i-24 yezigidi zemihla ngemihla, izinga labathengisi kwiqonga liphantsi kakhulu kunabakhuphisana nabo. Oku kuthetha ukhuphiswano olukhaphukhaphu kunye nenzuzo eninzi kubathengisi.
Nangona iAllegro inenkangeleko yendawo yentengiso yasekhaya, eneneni liqonga elixhaphake kakhulu kwihlabathi, ngakumbi eMpuma Yurophu.
Kulo mmandla apho amanye amaqonga amakhulu angekangeni ngokupheleleyo, i-Allegro yindawo yokuthengisa kakhulu.
I-E-Commerce ngoku iyimfuneko kwishishini ngalinye. Kule meko, akufuneki ushiye yonke i-e-commerce yakho ibotshelelwe kwiqonga elinye okanye indawo. Nangona iingxilimbela zehlabathi zithatha indawo yelocomotive, zininzi iindawo zentengiso ezomeleleyo kwingingqi. UAllegro ngomnye wabo.
Ikomkhulu ePoland, le ndawo yentengiso inokubonelela ngemodeli entsha yengeniso yeshishini lakho. Ngaphandle koko; Le marike, apho phantse yonke imveliso ithengiswa kwaye inani labathengisi aliphezulu kakhulu, linengeniso eninzi kuneemarike ezinkulu ze-5 eTurkey kuphela.
Kukuwe ukuphuhlisa inethiwekhi yakho ye-e-export ngokuthatha indawo yakho kule marike ye-niche. Into ekufuneka uyenzile kukufikelela kummeli wePropar. I-Propar liqabane lesisombululo se-Allegro eTurkey kwaye ibonelela ngenkxaso kuyo yonke imiba oyifunayo.
Iipropathi zokudityaniswa kweAllegro
Intsebenziswano kunye nokuhlanganiswa kwePropar-Allegro; Ikuvumela ukuba uqalise ngokulula ukuthengisa kwi-Allegro. Ngojongano oluphambili lwePropar, unokongeza iAllegro kwinethiwekhi yakho yokuthengisa ngelixa ulawula amaqonga ehlabathi kunye neevenkile zakho ezikwi-intanethi eTurkey.
E-Allegro, ulwimi lwakhe lwenkobe luyiPolish, kunokwenzeka ukuthengisa kuphela ngesiTurkey, kunye nepaneli yePropar. Dlulisa iimveliso zakho kwiphaneli yePropar kwaye uzithengise ngokulula kwi-Allegro. Ngaphaya koko, ulwazi lwemveliso yakho luza kuguqulelwa kwisiPolish kwaye iiyunithi zomlinganiselo wemveliso yakho ziya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Unokujonga iiodolo zakho ezivela kwi-Allegro kwiqela elinye kwaye ukhuphe ii-invoyisi ze-imeyile ngokucofa kanye.
Ngaphezu koko, ukuba awunayo ivenkile e-Allegro, iqela le-Propar livula ivenkile yakho ye-Allegro simahla egameni leshishini lakho!